Isixhobo soLawulo lweDijithali yesifo seswekile-Isixhobo soLawulo lweDijithali yeSisombululo-iSinocare
Isixhobo soLawulo lweDijithali yeswekile
Amanqaku obuhlungu kuLawulo lweSwekile
Isifo seswekile sele siyingxaki yezempilo kwihlabathi liphela, kwaye ukwanda kwesifo seswekile kuyanda, okuzisa umthwalo onzima kuluntu nakubantu. Ngapha koko, ngasemva kwenani labantu abaneswekile, kukho ingxaki yezinga lokulawula iswekile esezantsi, kwaye ukuthotyelwa kwezigulana ezisezantsi sisizathu esibalulekileyo senqanaba lolawulo oluphantsi Ukuthobela okuphantsi kuyonyusa umngcipheko weengxaki. Ukusuka kwimbono yentlalo kunye neyamashishini, ukwanda kwesifo seswekile kuthetha ukwanda kokulaliswa esibhedlele kunye neendleko zonyango, ukonyuka komthwalo weinshurensi yezonyango kunye nokunyuka okuhambelanayo kwimbuyekezo yeinshurensi yorhwebo; Kwangelo xesha, ngenxa yokuba amayeza ebekufanele ukuba asetyenziswe zizigulana awancedi kwaye izikhombisi ebekufanele ukuba zibekwe esweni azange zenziwe, umthamo wentengiso wamashishini amayeza kunye nezixhobo nawo achaphazelekayo.
Kwixesha elidlulileyo, ukuthotyelwa kolawulo kwezigulana ezinesifo seswekile bekuphantsi, ikakhulu ngenxa yokunqongophala kokuqokelelwa kwedatha kunye nezixhobo zolawulo Idatha enamacala aliqela sisiseko sohlalutyo lokuziphatha kwesigulana kunye nolawulo lomntu. Njengomvelisi wesithandathu we-glucose yegazi kwihlabathi, iSinocare inokubonelela ngezixhobo zokuchonga ezikrelekrele kwizalathi ezahlukeneyo (iswekile yegazi, i-uric acid, uxinzelelo lwegazi, i-lipid yegazi, ukungcwatywa, njl.njl. ukuqokelelwa kwedatha ngokufanelekileyo kunye nezixhobo zolawulo kwizigulana.
Ulawulo lwedijithali kunye nesixhobo sokufumanisa isifo seswekile
I-Sinocare ibonelela ngeglucose yegazi ekumgangatho ophezulu, i-lipid yegazi, i-uric acid kunye nezinye izixhobo zokufumanisa ezineziphumo ezichanekileyo kunye nokusebenza ngokugqwesileyo, kwaye inokubonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokuhambisa idatha kunye nolawulo.
Izibhedlele / iikliniki
Amashishini amayeza / amayeza okhathalelo lwempilo amashishini
Umbutho wolawulo lwempilo kwi-Intanethi
Inkampani yeinshurensi yorhwebo
1. I-Sinocare ibonelela ngezixhobo zokuchonga ezikrelekrele zeBluetooth kunye nomgaqo-nkqubo wonxibelelwano weBluetooth okanye i-SDK, enokuthi ifikelele kumthengi okanye yeyomntu wesithathu i-APP ukuze ifumane ukuhanjiswa kwedatha kunye nokugcinwa kwayo.
2. I-Sinocare ibonelela ngezixhobo zeBluetooth zokuchonga ezikrelekrele, kwaye ikwabonelela ngeSinocare eyakhe yegazi iswekile yedatha ye-APP kunye nemvelaphi, ukuze kuqinisekiswe ukufayilwa kweerekhodi zempilo yezigulana, ukufunyanwa kwesalathiso, ukuhanjiswa kwedatha ngokuzenzekelayo, ukugcinwa ngokuzenzekelayo, uhlalutyo oluzenzekelayo kunye nembali irekhodi uphononongo.
3. Intsebenziswano enzulu: ISinocare ibonelela ngehardware ekrelekrele kunye neenkonzo zesoftware ngokweemfuno zabathengi.